LEGO ရဲ့အနာဂတ်ကရောရှိမှာလား Jurassic World အစုံကမြို့ပြဖြစ်မလား။
29 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 221 Views စာ 1 မှတ်ချက် 2022, CinemaCon, City, Colin Trevorrow, ဒီနောဆီးယား, Jurassic World, Jurassic World: ဂုဏ်တော်, Jurassic Worldဖြေ: Fallen Kingdom, Las Vegas မှ, Lego, Lego Jurassic World
၏အနာဂတ် Lego Jurassic World ရုပ်ရှင်သစ်အတွက်ဒါရိုက်တာ Colin Trevorrow ရဲ့အရိပ်အမြွက်တွေကဘာကိုမဆိုဆိုလိုရင်အရင်ကထက်ပိုမြို့ပြဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Las Vegas ရှိနောက်ဆုံး CinemaCon တွင်စာနယ်ဇင်းနှင့်ရုပ်ရှင်လောကမှအဖွဲ့ဝင်များသည် Universal Studios အပါအ ၀ င်လာမည့်ပရောဂျက်များကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ panel ကအမြင်သစ်ကိုပြသခဲ့တယ် Jurassic Worldဒါရိုက်တာ Colin Trevorrow သည် franchise ၌လာမည့်ရုပ်ရှင်၏အနှစ်သာရအတွက်အဓိကအရိပ်အမြွက်ကိုမျှဝေခဲ့သည်။
သီးသန့်ပွဲ၌ဖြန့်ချိခဲ့သောအဓိကလှောင်ပြောင်မှုသည်ဒါရိုက်တာ Colin Trevorrow နှင့်တွစ်တာတွင်မျှဝေခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်သည်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအခြေခံသည် - လူသားများသည်ဒိုင်နိုဆောများအကြားတွင်လုံခြုံစွာနေနိုင်မည်လား။
"ဒီရုပ်ရှင်ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်၊ ဒိုင်နိုဆောတွေငါတို့နဲ့နေခဲ့ရင်မင်းလုံခြုံလား။ အဖြေက ... မဟုတ်ဘူး"#JurassicWorldDominion #CinemaCon
- Beatrice Verhoeven (@bverhoev) သြဂုတ်လ 26, 2021
လွန်ခဲ့သောရုပ်ရှင်နှစ်ကား၏အဖြစ်အပျက်များကို အခြေခံ၍ ပေးထားသောအဖြေသည်မှန်သည်ဟုထင်ရသည်။ သို့သော်လည်း franchise ၏အနာဂတ်သည် Isla Nublar မှထွက်ခွာပြီးမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်၌ဒိုင်နိုဆောများနှင့်ပြည်မသို့ ဦး တည်လိမ့်မည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြနိုင်သည်။ Jurassic World: ကြွေလွင့်သောနိုင်ငံတော်နှင့်၎င်း Lego အုပ်စုကအသာစီးယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါကအနာဂတ်ကိုဆိုလိုနိုင်တယ် Lego အစုံများသည် ပို၍ ခေတ်မီသောနေရာများနှင့်လက်ခံနိုင်သည် cityဇာတ်လမ်း၏အခြေခံကို scapes Jurassic World: ဂုဏ်တော်။ လောလောဆယ်မှာရုပ်ရှင်အတွက်မော်ဒယ်တွေကိုအတည်ပြုမထားပေမယ့်အဲဒါကရှင်းပါတယ် Lego အဖွဲ့က p မှာရှိနေသေးတယ်artUniversal Studios နှင့် ပူးပေါင်း၍ လာမည့်ကာတွန်းများကိုရည်ညွှန်းသည့်တိုင်တည်ဆောက်မှုများနှင့် franchise Cretaceous စခန်း စီးရီး။
Jurassic World: ဂုဏ်တော်သည် လောလောဆယ်ဖြန့်ဖို့စောင့်နေပါတယ် ဇွန်လ ၁၀ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့်အတူ Lego အုပ်စုရဲ့အတိတ်အပါအဝင် franchise တွေနဲ့ လှိုင်းသစ်တစ်ခု စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်ရုံတင်ပြသမည့်ရုပ်ရှင်သစ်အတွက်အနည်းငယ်ဖြန့်ချိဖွယ်ရှိပုံရသည်။ အနာဂတ်အကြောင်းပိုသိရတဲ့အခါငါတို့မင်းကိုအသိပေးလိမ့်မယ် Lego Jurassic World.
← LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယို 'T'Challa Star-Lord?
Fennec Shand မင်းသားသည်သူမ၏ LEGO ကိုနှစ်ဆတိုးသည် Star Wars minifigure တစီးကို →
တစ်ခုမှာ "LEGO ၏အနာဂတ်ဖြစ်သည် Jurassic World မြို့ပြတွေအများကြီးပိုသတ်မှတ်ပေးမလား။"
နောက် Lego အတွက်ငါအများကြီးလိုချင်တယ် Jurassic World :
Tyrannosaurus Rex ရုပ်ကိုသူ၏အထက်မေးရိုး၏ထိပ်ဖျားနှင့်အနည်းငယ်ပိုကျယ်ပြီးမျက်လုံးအထက်၌ရှိသောသူ၏ ဦး ခေါင်းထိပ်သည်ပိုရှည်သည်။
JP3 အထီး Velociraptor ကို အခြေခံ၍ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော Velociraptor ရုပ်ပုံသည် ဦး ခေါင်းသေးငယ်သည်၊ မေးရိုးရှည်သည်၊ အမြီးပိုရှည်သည်၊ ခြေများအနည်းငယ်ပိုတိုသည်၊ ဦး ခေါင်းနောက်၌ဆူးများသို့မဟုတ် proto-feathers များနှင့်မျက်လုံးအနီးရှိတောင်စောင်းများ၊
Teratophoneus မှ Jurassic World Baryonyx ကိန်းဂဏန်းပေါ် မူတည်၍ ကြွေလွင့်သောနိုင်ငံတော်သည်မင်းခေါင်း၊ လက်များ (T-Rex ၏လက်များ) နှင့်ခြေချောင်း ၃ ချောင်းပါ ၀ င်သောမြေများမဟုတ်ဘဲခြေဖဝါးကိုပြောင်းရန်သာဖြစ်သည်။
Sibo မီးတောင် (အကျယ် ၅၀ စင်တီမီတာ) ရှိသည်။